UkuFumana ukuThengiswa nge-imeyile kunye ne-ividence | Martech Zone
I-imeyile iyaqhubeka nokuba yinto elawulayo kwishishini lokuthengisa kwi-Intanethi. Ngelixa itekhnoloji izifakile kuyo yonke eminye imiba yentengiso ekwi-Intanethi, i-imeyile ibonakala ngathi yeyona ihambileyo kwiminyaka engamashumi amabini. Inkqubela phambili yamva nje efikelelekayo ukuzenzekela ngokuzenzekelayo zinomdla, kodwa ukufunyanwa, imvume kunye ne-SPAM kusakhokelela kwimiceli mngeni kushishino.
Ukwakha umxholo omkhulu kunye ne-imeyile efanelekileyo yeyona ndawo ilula… elona candelo linzima lisathengwa. Ukwakha uluhlu olukhulu lokuthengisa kunokuba nzima kakhulu. Ngevolumu ephezulu ye-SPAM, abathengi bakhusela ngokufanelekileyo iidilesi zabo ze-imeyile kwaye bayathandabuza ekwabelaneni ngayo. Ukuhenda umntu ukuba oyise oku kunokuba ngumceli mngeni omkhulu, ke yintoni ekufuneka ayenze umthengisi?
NgoDisemba, IHrring Herring babhengeze ividence phakathi kwabo baphumelele amabhaso kwi-Global 100. ividence yeyokuqala yokufumana iintengiso kwi-imeyile, isebenzisa itekhnoloji yokuziphatha ekujoliseni ukuhambelana nokunikezelwa kwe-imeyile kwezona rekhodi zintle, ukuze abanini boluhlu "bathumele kancinci kwaye bafumane ngaphezulu," benze imali uluhlu lwabo ngokuthembeka ngelixa abathengisi bebona i-ROI elungileyo.
Nanku umzekelo we-imeyile… umthengisi ngu Ford kwaye umphathi woluhlu ngu Nxibelelana noBomi, indawo edibanisa abathengi neReal Estate, uLondolozo lweKhaya kunye nabathengisi abazenzekelayo.
Le ayisiyiyo nje iqela lesithathu intengiso. Umxholo uyilwe ngononophelo kwaye utshatiswe ngokusondeleyo kubaphulaphuli ukuqinisekisa ukuba umphathi woluhlu akakho semngciphekweni wokuphulukana nombhalisi. Ngenxa yokuba umxholo uhambelana ngokusondeleyo kubaphulaphuli kwaye ngokuchaseneyo, ividence ifikelela kwinqanaba eliphezulu lokucofa ngokusebenzisa indlela yokulinda ilungelo lomenzi, ebizwa ngokuba yi @rank. I @rank isetyenziselwa ukubonelela ngeyona rekhodi ikumgangatho ophezulu ngexabiso umthengisi azimiseleyo ukulihlawula.
Amanqaku e-multivariate afaka:
@brand ulwalamano -Ali nqanaba lilinganisela indlela ekufutshane ngayo iprofayili kumzi mveliso okanye uphawu. Esi salathisi sisetyenziselwa ukujolisa kunye noluhlu lwamaxabiso amacandelo kunye neeprofayili.
Umgangatho @campaign -Amanqaku asekwe ekusebenzeni kwamaphulo okufumana okuqhutywa kwinethiwekhi ye-ividence. Unokubeka uphawu kwimikhankaso yakho kwimbali yakho kunye nentsebenzo yentengiso.
@nokuban -Umlinganiso ubonakalisa inani leimeyile ezinokuhanjiswa kwindawo ekujolise kuyo ngexesha elithile. Inxulunyaniswe nendlela yokuthengisa kunye noxinzelelo lwentengiso.
Abathengisi kunye nabaphathi boluhlu bobabini banikwe ingqiqo yamanani-umzobo wefaneli (lo mzekelo ungasentla awubonisi ukulandela umkhondo wokukhetha) kunye nedashboard enezikhombisi zokusebenza eziphambili.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, idatha yobhaliso igcinwa iyimfihlo kwaye ayinakufikelelwa kumshicileli. I-ividence isebenza nzima ukuqinisekisa ukuba abapapashi banikwa umxholo omkhulu abaphulaphuli babo abaya kuwuxabisa… kwaye abathengisi bavezwa kubabhalisi abafanelekileyo abaya kufuna ukuphendula kwisibonelelo. ividence ikwasebenza ukufezekisa ngaphezulu ukuhanjiswa kwee-imeyile.
tags: ukufunyanwa kwe-imeyileintengiso ye-imeyileemail Marketingividenceukufumana umrhumoIntengiso ye-imeyile yomntu wesithathu
UDelivra usungula iNew Website
Ungayifumana njani i-SEO Cheat